Windows 7 waxaa haatan shirkada Microsoft ay soo saartay 22 Luulyo 2009, Barnaamij Cusub oo la yiraahdo Windows 7, iyadoo suuqyadana lagu sii daayay 22 Oktoobar 2009. Windows 7 waa nidaam farsameed oo kombuyuutar shaqsi ah kaas oo uu soo saaray Microsoft oo qayb ka ah qoyska Windows NT ee nidaamka hawlgalka. Waxaa loo sii daayey in la soo saaro July 22, 2009, waxaana guud ahaan la helaa 22-kii Bishii Oktoobar 2009,  in ka yar saddex sano ka dib markii la sii daayay ee loo yaqaan 'Windows Vista'. Windows 7 ee miiska serverka, Windows Server 2008 R2, ayaa la sii daayay.
Windows 7 waxaa ugu horeysay loogu talagalay in lagu noqdo casriyeynta kordhinta Microsoft Windows, loogu talagalay in wax looga qabto saldhigga Windows Vista ee xasaasiga ah ee saboolka ah iyada oo la ilaalinayo qalabka iyo nadaamka software. Windows 7 ayaa sii wanaajisay horumarinta Windows Aero (adeegsiga user-ka ee lagu soo bandhigay Windows Vista) iyada oo lagu daro guddi-hawleed la casriyeeyay kaas oo u oggolaanaya codsiyada in loo "qadariyo", iyo hannaanka cusub ee maareynta suuqa. Qalab kale oo cusub ayaa lagu daray nidaamka qalliinka, oo ay ku jiraan maktabadaha, nidaamka cusub ee nidaamka wadaadka ee HomeGroup, iyo taageerida talooyin badan. Muuqaal "Action Center" oo cusub ayaa sidoo kale lagu daray si loo helo aragti guud oo ku saabsan xogta amniga iyo dayactirka nadaamka, iyo tweaks loo sameeyey nidaamka Xakamaynta Xisaabaadka Macmiilka si ay uga dhigaan mid aan dhib badneyn. Windows 7 ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay nuqullo la cusbooneysiiyay oo ku saabsan codsiyo dhawr ah, oo ay ku jiraan Internet Explorer 8, Windows Media Player, iyo Windows Media Center.
Taa waxaa lid ku ah Windows Vista, Windows 7 guud ahaan waxaa lagu amaanay kuwa naqdiya, kuwaas oo u tixgeliyey nidaamka qalliinka in uu noqdo horumarin weyn oo ku saabsan horgalkeeda iyada oo ay ugu wacan tahay waxqabadka korodhka ah, isugeyntiisi intaa ka badan (oo si gaar ah loogu talagalay hawsha cusub), Kantaroolka koontada koontooyinka, iyo horumarin kale oo laga sameeyay meeraha. Windows 7 wuxuu ahaa guusha weyn ee Microsoft; xitaa ka hor intaan la sii deyn rasmigeeda, iibinta horay u dalbatay ee 7-ka iibiyeyaasha online-ka ah ee Amazon.com ayaa dhaaftay diiwaanadii hore. In ka badan lix bilood, in ka badan 100 milyan oo nuqul ah ayaa lagu iibiyey adduunka oo dhan, iyada oo la sii kordhiyay in ka badan 630 milyan oo shatiyadood ah July 2012-ka. Laga soo bilaabo Ogosto 2018, qiyaastii 39% kombiyuutarada ku shaqeeya Windows ayaa shaqaynaya Windows 7. 
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Windows_7&oldid=191979"
Last edited on 15 May 2019, at 07:54
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 15 May 2019, marka ee eheed 07:54.